XOG: RW Rooble oo Jahawareer kala kulmay Magacaabida Guddiyada Doorashada & Xogtii u dambeysay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Eng Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku mashquulsan magacaabida guddiyada doorashooyinka Soomaaliya, markii ay guddiyadii hore walaac kamuujiyeen Midowga Musharaxiinta Madaxweyne-nimada dalka oo sheegay in ay u badnaayeen shaqaale dawladeed, xubno katirsan Nabadsugidda iyo taageerayaasha Madaxda dawladda Faderaalka.
Guddi gaar ah oo Raysalwasaare Rooble u saaray turxaan-bixinta guddiyada ayaa aqbalay in liiska laga saaro kudhawaad 40 xubnood oo ay ku jiraan xubnaha la eedeeyey qaarkood, guddiga ayaa sheegay in ay baaris mariyen dhamman xubnahan.
Saacadaha nagu soo aadan ayaa la shaacin doonaa magacyada guddiyada bedelka ah ee lamagacaabi doono, sida aan ogaanay, waxaana magacyada cusub ay noqon donaan kuwa badankooda aysan taageero badan u heynin mucaaradka, sida ay cadeynayaan xogaha la helayo.
34 kamid ah xubnaha la saaray waxaa dhexdhexaadnimadooda duray Mucaaradka oo sheegay in aysan kalsooni ku qabi Karin doorashooyinka ay qabanayaan, lakiin xogaha ayaa sheegaya in xubnaha la magacaabi doono ay durba sii duri doonaan mucaaradka.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo doonayay in laga bedelo xubin guddiga kamid ah oo ay isku beel kasoo jeedan ayaa ku guuldareystay dalabkiisa, taas oo keentay in uu dib u bilaabo mucaaradid ku wajahan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya.
Warsame oo doonaya in uu helo mudane baarlamaan ama ugu yaraan xubinta beeshiisa u helo qof taageersan ayaa kuguuldareystay wax u muuqday dagaal siyaasadeed uu kujiray mudo dheer oo kuwajahan sidii xubinta guddiga doorashada ee beeshiisa kana imaanaysa Galmudug u noqon lahayd xubin uu isagu wato.
Ka sokow 34 xubnood ee ay ku dhageen mucaaradka, waxaa jira 6 xubnood oo ay ku dhegeen dawlad gobaleedyada qaarkood, gaar ahaana Puntland ay dalbanaysay in la bedelo 3 xubnood oo dhalinyarro ahaa, kuwaas oo kasoo jeeday mandiqadaas ahaana xubnihii 3da ah ee Villa Soomaaliya ku dartay guddiga heer dawlad gobaleed ee Puntland.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa telfoon kula hadlay madaxda dawlad gobaleedyada saluugsan xubnahaas, wuxuuna dadal ku bixiyey sidii loo sii deyn lahaa, balse wuu ku guuldareystay sida ay cadeynayaan xogaha laga helayo ilo aad ugu dhaw-dhaw Raysalwasaaraha Faderaalka.
Wararka mucaaradka laga helayo ayaa sheegaya in ay ku tuhmayaan Raysalwasaare Rooble in taladan uusan madax banaani u heysan, oo ay magacaabida uu leeyahay Madaxweyne Farmaajo, taas oo ay welwel ka qabaan mucaaradka.
Mr, Rooble ayaa dadaal galinaya qabsoomida doorashada iyo hirgalinta doorashooyinka, waxaana uu telfoono badan kala hadlay dhammaan dhinacyada, isagoo diiradda saaraya xaqiijinta heshiiskii 27-kii May oo ay tahay in lahirgaliyo.
Marka lagu dhawaaqo guddiyadan, waxaa lafilayaa in ay yeeshaan kulan wadajir ah oo ay dhexdooda yeeshaan kulan ay dib ugu dooranayaan guddoonkooda, ka dibna ay si’i wadajir ah kusoo saaraan Jadwalka doorashada oo ah Meesha ugu horeysa ee ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xooga gali doonaan.